गलत संस्कारको प्रतिफल गलत नै हुन्छ ! – Himalitimes
गलत संस्कारको प्रतिफल गलत नै हुन्छ !
| प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ५, २०७५
प्रचण्डले रेलिङ तोडे,बमले भौतिक संरचना उडाए । सडकमा पाईप बमले खाल्डो बनाए ,सत्र हजार त आफ्नालाई मात्रै सहिद बनाए । त्यस बाहेक कैंयौं नेपालीको जिवनलाई लाशमा परिणत गराए । गुरु मारे , कतिको घरवार लुटे , छोरी बुहारीलाई बिधवा बनाए , आमा बालाई टुहुरो बनाए , राज्यको सामाजिक सदभाव र धार्मिक आस्था बिथोले , मन्दिरमा गएर सुसु गरे । गाई मारेर भोज भतेर गरे ,अनेकौं प्रचण्ड उद्वुम मचाए र राज्य विप्लवको कु-कार्य गरे ।
तत्पश्चात जनयुद्व पछि पनि शान्ति प्रकृयामा आएपछि सरकारमा हालिमुहालि गरि राज्यको ढुकुटीलाई सुकुटि नै बनाए , ब्रम्हलुट गरे , नितिगत भ्रष्टचार गरे । चालीस लाखमा बहुमत बिदेशीलाई मात्र नेपाली बनाए , रातारात भाटभटेनीलाई धनी बनाए । सुमार्गी प्रयोग गरि लुटेको पैसालाई व्यवस्थित गरे , हिमालयन अन टप पानीमा आफ्नो बर्चस्व वनाए । सुनिन्छ चन्द्रगिरीमा केवल कार सररर गराए । यी यावत कुराहरू अहिले सामाजिक संजालमा देख्न पाईन्छ । जताततै सर्वत्र सुन्न पाईन्छ । तर हामी नेपाली जाती हौँ , हामीमा सहनशिलता, धर्म , संस्कार ,क्षमा दिन सक्ने क्षमता छ र हुनपर्छ ।
हामी क्रुर र उग्र हुन जरूरत छैन । प्रचण्डले गरेको कुकर्मको हामी विश्लेषण तथा चर्चा परिचर्चा गर्दै गरौंला । उहाँलाई दण्ड पनि गरौंला ,जेलनेल पनि हालौंला तर अहिले उहाँको अर्धाङ्गिनी , श्रीमती ,बुढी तथा जेे भने पनि परिवार बिरामीले ग्रस्त तथा नाजुक अवस्थामा पुगेको बेला हरेक नेपालीले यो संवेदनशील क्षण , यो दर्द पीडा तथा मर्म बुझ्नै पर्दछ ।
साम्राज्यवादको नशा , संगत तथा हिमचिमले गर्दा होला शायद उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई अंग्रेजी शव्दमा म्याडम मिसेज भन्नु हुन्छ तर हामी उहाँलाई प्रचण्ड जीको अर्धाङ्गिनी भनेर नै संबोधन गर्छौं । अहिले हामीले सुनेको अनुरूप एकदमै अहस्यै रोगले च्यापेको छ । यस्तो संबेदनशिल घडीमा हामी नेपालीले अाफ्नो धर्म र संस्कार छोड्न हुँदैन । हामीले यस्तो अप्ठेरो घडीमा सहिष्णुता देखाउन अत्यन्तै जरूरी छ ।
प्रचण्ड जीले आफ्नो धर्म छाडेता पनि उहाँ अहिले आफ्नो धर्म पत्नी लिएर अकेरिका प्रस्थान गर्नु भएको छ । जताततै बिकार छरेर हिंडेता पनी आफ्नो धर्म पत्नीको उपचारार्थ तथा शरिरको बिकार हटाउन उहाँले सक्दो प्रयत्न गरेका छन् । माता सीता प्रोग्रेसिभ सुपर न्यूक्लियर प्लासी (पिएसपी) भन्ने रोगबाट ग्रसित यसअघि सिंगापुरमा उपचार हुँदै आएको थियो ।
पतीको भुमिका उहाँले निर्वाध रूपले निभाउँदै प्राकृतिक उपचारलाई नि प्राथमिकता राख्दै कात्तिकमा उनले सीतालाई म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा नुहाउन पनि लगेका थिए । पत्नी सीताको रोगसँग सम्बन्धित उपचारको राम्रो हुन्छ र पछिल्लो समय यश रोगको निदान गर्ने प्रविधिको विकास भएको भन्ने थाहा पाएको हुनाले र पत्नी सीताको बारम्वार आग्रह पछि अमेरिका लगिदिए सन्चो हुन्थ्यो कि ? भन्ने आसले गर्दा उहाँहरू साम्राज्यवादको अगुवा देशमा होम्मिएर जान परेको हो ।
यो रोग एकदम शीत बडेर जान्छ दिमागले नै प्रोग्रेसिभ सिद्वान्त बोकेका प्रचण्डलाई रोग बारे थाहा राम्रै छ । मस्तिष्कका विभिन्न रोग तथा समस्याहरु मध्ये प्रोगेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी (पिएसपी) पनि एक हो । यो रोग निकै कम मानिसमा देखिने गर्दछ र यो पार्किन्सन्स भन्दा भिन्नै छ । जिब्रो चिप्लिएर भेनेजुएला घटनामा अमेरिकी साम्राज्य बिरूद्व बोलेका प्रचण्ड अन्तत त्यहि देशको जोन हकिङ्स् अस्पतालमा आफ्नो पत्नीको उपचरार्थ जान परेको हो ।
हुनत प्रचण्ड र केपिले सामान्ती देख्ने राजसंस्थाको हरेक बिमार देखि अति नै संबेदनशिल मुटुको शल्यकृया पनि नेपाल कै अस्पतालमा हुन्छ भने वीर अस्पतालको भिभिआईपीका हरेक वार्ड अशिले सम्म उपयोगमा नआएर त्यसको रेखदेखमा मात्र बर्सेनि करडौं रकम व्यर्थ नास भएर गईरहेको अवस्था छ । भर्खरै मुमा बडामहारनी सरकार जो नव्बे काटेर पितृ सरह छन् उहाँको उपचार पनि नेपालमै भएर स्वस्थ भएर नारायणहिटी आफ्नो पति स्वर्गीय राजा महेन्द्रले बनाईदिएका निवासमा फर्कि सकेका छन् । तर हाम्रा सर्वहारा वर्गका नेताहरू हाच्छिउँ आउनु भन्दा पहिलै बिदेशमा उपचारार्थ जान्छन् बिचरा सरबहारा जो परे , मौकामा खाउँ , लाउँ , घुमौं भन्ने लाल्सा जो लाग्छ ।
हुन त माता सीताको रोगको उपचार नेपालमा प्रबृधीले गर्दा असम्भव छ भने , यो नै सहि मौका होईन र ? नेपालमा त्यस किसिमको रोगको उपचार गर्ने प्रबृधीको बिकास गर्ने मौका , यस मौकालाई सहि सदुपयोग गरे भने त हाल यश किसिमको रोग बढ्दै गईरहेकोलाई निराकरण गर्न सकिन्थ्यो । कि अहिले बिश्लेसक , जनता र बिज्ञले शंका गरे झैँ अमेरिकन साम्राज्यबादको चीन घेराउ रणनितीलाई बल दिने र भारतलाई थिलो थिलो रूपमा राखिराख्न तीन ” के ” सीके , पीके र केपी ग्याङको ११ बुंदे सम्झौतालाई ठोस रूपमा पुर्याउने ग्राण्ड डिजायन अनुरूप कदमको रूपको भ्रमण हो ?
पहिले एशियन प्यासिफिक समिट , हिन्द महासागरको प्यासिफिक सम्मेलन , भेनेजुएला प्रकरण , नेपालको मुस्ताङको अमेरिकन र नेपाली सेनाको संयुुक्त तालीम , ११ बुँदे सम्झौता आदि घटनाक्रमले बस्तुस्थिती त्यति सहज दर्शाउँदैन । तर पनि बेनेफिट अफ डाउटलाई मध्येनजर गर्दै प्रचण्ड पत्नीको उपचारलाई हामी संवेदनशील नै हुनपर्दछ । कर्मनिष्ठको सन्देश अनुरूप कर्मनिष्ठका नियमहरू मध्ये नक्बर दुईको बुँदाले एउटा भेतनशील नागरिक शुन बे सिकाउँछ भने ” कसैको बिरोध नगरी बिग्रेको सुधार्ने र बाटो बिर्सेकाहरूलाई मुलधारमा आउन प्रेरित गर्ने । हुनत यो बुँदा पढ्दा जति सरल छ ब्यवहारमा लागू गर्न अत्यन्त मुश्किल छ ।
नेपालीहरू अरूलाई गाली गरी , नहोच्चाई , तल नपारी , खुट्टा नतानी बाँच्नै गाह्रो होला झैँ गर्छन् । आफ्नो भुल सुधार गर्न त परै जाओस् आफ्नो भुलमा क्षमा माग्दा पनि माग्दैनन् । अरूलाई तल झारेर मात्रै आफु सक्षम भएको देखाउन चाहन्छन् । आफु एउटा उदारणीय कर्म गरेर अगाडी बढ्नु भन्दा कसैलाई तथानाम भनी तल खसाले पछि मात्र आफु सफल स्थानमा पुगाउन नै सजिलो ठान्छन् ।
हो गाह्रो छ । तर यसलाई सबैले मनन गर्दै गए अगाडि बढ्दै गए देश साँच्चै नै सुन्दर र सफा बाताबरणमा हुर्कदै जाने छ । तसर्थ उनीहरूको गल्तिलाई हालको प्रचण्ड परिवारको यस दयनीय अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै हामी संबिेदनशील र चेतनशील नागरिक बन्न कोसिस गर्न पर्दछ ।
प्रचण्ड परिवारले आफ्नो छोरी तथा छोरा प्रकाश पनि गुमाए भने हाल पत्नी सीताको शारिरिक हालत नाजुक छ । एउटा परिवारले दिने संस्कारले पनि धेरै फरक पर्द रहेछ । युवराज पारसलाई एक्कासि बिमारले च्याप्दा कोमामा हुँदा प्रचण्ड पुत्र प्रकासले तथानाम तथा मृत्यु भयो । गँजेडीको भन्दै श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । यता नेपाल र थाईल्याण्डमा देशभरका जनताले युवराज पारसको दिर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै प्रत्येक मन्दिरमा पुजापाठ अर्चना गर्दै थिए ।
भगवान मान्नेले यसमा चमत्कार देख्छन् । उता डाक्टरले युवराज पारसको अवस्था ठिक छैन परिवार नअाउन्जेल भेन्टिलेटरमा राखेर अन्तिम दर्शन गराउने भन्दै थिए । यता गुरू गोरखनाथको आशिर्वाद पाएका शाह बंशीय राजपरिवारको सदस्यको त्यो अवस्था भएकोले सम्पुर्ण मठ मन्दिरमा जनताले पुजा अर्चना गर्दै थिए भने केही समुहले गुरू गोरक्षनाथको सम्पूर्ण मन्दिरमा पुजा लगाउँदै थिए । जुन दिन मृगस्थलीमा पुजा लगाउने र रोठ चढाउने दिन आयो , बैंककको अस्पतालमा मिर्याकल भयो अथवा अचम्म भयो , युवराज पारसको होस हायो ,आखा खुल्यो , डाक्टर र अस्पताल प्रशासन सबै चकित भए ,बल्ल सास आयो सम्पुर्ण नेपालीको र युवराज पारस बाँच्ने आशा जाग्यो ।
तसर्थ पुर्वीय दर्शन मान्ने मौलिक सभ्यतामा हुर्केको नेपाली हो यो बुझ्न पर्दछ । सराप्ने व्यक्ति परमधाममा लिन भईसके उहाँलाई श्रद्वासुमन छ ,भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली छ । कोहि व्यक्ती सराप्दैमा वा धारे हात लाउँदैमा मर्दैन । दिन नआए सम्म यमराजको बाउको पनि केहि लाग्दैन । तसर्थ हामीले आफ्नो सन्ततीलाई राम्रो संस्कार दिउँ । प्रचण्ड तथा तपाईका परिवार मान्न हुन्छ भने माता सीताको नाममा केही पुजापाठ गरौं , रोग निक नभए पनि अध्यात्मिकले मनमा शान्ति ल्याउँछ । सकिन्छ भने पुत्र प्रकासको आत्माको शान्तिको लागि केही गर्नुहोस् । काज कृया त गर्नु भएन बिश्वास लाग्दैन तर यति बुझ्नुहोस् तपाईको पत्नीको मनले मानेको छैन प्रकाश जिउँदो छैन भनेर ।
तपाई महान नेता आफै बुझ्नुहोस् । शान्ति आध्यात्मिकमा छ कि भौतिकवादमा ? यश दुखद घडीमा सराप्ने र धारे हात लाउने संस्कार छोडौं । सकिन्छ ,सुस्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना गरूम सकिन्न चुपो लागेर बसुम्। सबैले गरेको सकरात्मक तथा नकारात्मक कृयाको प्रतिफल दिने स्वयम् पिता परमेश्वर छन् । माता सीताको दिर्घायु तथा सिघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दै श्री गुरु गोरखनाथसँग प्रार्थना गर्दछु । मनमा शान्ति मिलोस् र श्री पशुपतीनाथले कल्याण गरून् । जय होस् !
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ५, २०७५ 1:19:05 PM |
Prevयति महँगो सुगा ,जुन साढे १५ करोडमा बिक्रि भयो !
Nextपेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत्